May Nyane: ဘ၀လက်တွဲဖော်
ပို့စ်လေးက တိုတိုလေး... ဒီထက်မက ရေးသင့်တာ...
ပုံလေးကတော့ ချစ်စရာလေး... နှစ်ယောက်လုံးကို ပြောတာ... အန်တီငြိမ်းကတော့ ပိုချစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ နော့်...
အမကြီးဆီက လေ့လာ ဆည်းပူး နာကြားသွားပါကြောင်းး)
ပို့စ်လေးက သိပ်မရှည်ပေမယ့် သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ရှည်လျားလှတဲ့ ဘဝတစ်ခုကို မြင်လိုက်ရတယ် အမရေ၊
ဓါတ်ပုံလေးကိုတော့ သဘောကျတယ်ဗျ၊ တော်တော် လေးကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်။
'မ'ရဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်က ဝတ္ထုတပုဒ်ဖတ်ရသလို ငြိမ့်ငြိမ့်လေး။ ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်လေးအကြောင်း ဒီထက်ပိုဖတ်ချင်သေး။ ဓာတ်ပုံလေးထဲမှာကို အချစ်တွေစီးမျောနေတယ်။
သမီး.. ဂျစ်..ညီလင်း.. မတန်ခူး
တိုတိုလေးနဲ့ ထိမယ်ထင်တာနဲ့ တုတုလေးရေးလိုက်တာ :D ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်လေးအကြောင်းလည်း ပိုရေးချင်ပါသေးတယ် မတန်ခူးရေ.. သူများတွေက ကြွားတယ်ထင်ပြီး အမြင်ကပ်မှာစိုးလို့ပါ.. :P ပြီးတော့ တခေါက် ခင်မင်းဇော်ရေးထားဖူးတာကြောင့်လည်း လျှော့လိုက်တာပါ:)
ဓါတ်ပုံလေးကလည်း တကယ်တော့ တပည့်လေးတယောက်က လျှပ်တပြက်ရိုက်ထားတာ.. သဘာဝပေါ့ ..ဟဲဟဲ။
Red Alret said...
ဆရာမကို ပရင့်မီဒီယာပေါ်မှာကတည်းက အားပေးနေတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တစ်ယောက်ပါ။ ဆရာမ ဘလော့ဂ်ကိုလည်း လာလည် နေကျပါ။ ဒီနေ့မှ ၀င် နှုတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
စီဗုံးထဲက ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်းတွေရှင်းသွားတဲ့အတွက်လည်း ၀မ်းသာပါတယ်။
အနားမှာ ပါရမီဖြည့်နေတဲ့ လက်တွဲဖော်နဲ့ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုကလေးကို ငေးမောသွားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လှမ်းနေကြဦးမှာ သေချာပါတယ် အမရေ..။
Hi Sa yar ma,
It is too short to read.
I felt in deeply.
Because now I m 36 years.